Nkụzi na Ịmụta + Na-arụ ọrụ (ihe dị iche iche) - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Ịmụta + Na-arụ ọrụ (di iche)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ịmụta + Na-arụ ọrụ (di iche)
Dịka onye na-edozi isi ị na - aghọ ndị ọkachamara n'ịkụcha, na - emegharị, na - agba agba ma na - eme ka ọ bụrụ ihe ị na - agbaso. Na mgbakwunye na nlekọta ahụike, ị na-amụtakwa usoro ndị dị mkpa n'aka na iche ihu. Ị mụtara ịrụ ọrụ n'adabereghị na mgbe ị gụsịrị akwụkwọ, ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ dịka onye na-agụ akwụkwọ.
Ị na-etinye onwe gị n'èzí nke ụgbọ ala. Ị mụta otú e si arụzi mmebi dị mfe nke ọrụ nke ugbo ala. Ị mụta otu esi arụ ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche, wepu ma kpoo ma kpofuo akụkụ ụgbọ ala, weld na solder, tap na ájá. Ị mụtara ịmepụta àgwà ọma ma jiri nlezianya kpaa ahụ. Ị ga-amụtakwa banyere chassis, engines, nchekwa ọrụ na ọkụ eletrik.
Ihe e mesiri ike n'ọzụzụ a bụ ọrụ dịka onye ahịa - nwanyị na-azụ ahịa nke nwere nkà na ụzụ. Ị mụtara ịzụ ahịa. Ị na-eme na onye ọzụzụ ọzụzụ na ọzụzụ oge ụfọdụ ka esi ekwurịta okwu nke ọma. Ị na-amụta usoro ngosi na usoro ahịa na ikpokọta nghọta azụmahịa na ihe ọmụma ngwaahịa.
Ihe mmesi ike na ọzụzụ a bụ ọrụ dịka onye ahịa - onye ahịa na ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa ụlọ ahịa. Ị mụtara ịzụ ahịa. Ị na-ekwurịta okwu nke ọma. Ị na-amụta ihe ngosi na usoro ahịa. Ị nweta ikike azụmahịa na ihe ọmụma ngwaahịa.
Ị mụtara ịrụ ọrụ na ụmụ ọhụrụ, ụmụaka na-eto eto ma ọ bụ ụmụaka sitere na ụlọ akwụkwọ praịmarị. Ị na-arụ ọrụ na-akwalite akwụkwọ ma ọ bụ na ị na-ahụ maka nlekọta ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ mgbe ọ gasịrị. Mgbe ụfọdụ ị na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ebe ị na-akwado onye nkuzi nke ụmụaka ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ praịmarị.
NEW - Production ọrụ ígwè - CNC
Ị mara nke ọma na ị na-arụ ọrụ ígwè na ịkwadebe maka ịmepụta ọrụ na metal. Enwere ike na CNC metal nhazi.
Ị mụta otú e si ahazi ihe omume egwuregwu ma na-eduzi ndị na-eto eto na ọrụ agbata obi na mkpakọrịta mpaghara. Ị ga-amụ banyere ihe eji egwu na ihe egwuregwu ma mụta otu esi akpali ndị na-eto eto ime ihe. Ị ga-enweta ihe ọmụma bara uru banyere ịmalite ọkụ, ihe oriri, mmekorita, nke otu ìgwè, yana enyemaka mbụ. Ị mụtara site na ịlụ ọgụ na egwuregwu bọl. Onye nlekọta egwuregwu na oge agụmakwụkwọ oge ọ bụ naanị ọzụzụ egwuregwu na ọkwa BSO.
Ị mụta ụzọ e si enweta ụgwọ ọrụ, ibu, mkpọ na ngwongwo. Ị mụta otú e si edozi, ịlele, kwadebe maka mbupu, ịgagharị na ịchekwa. Maka nke a, ị na-amụta iji ngwaọrụ ndị dị ka obere pallet ma ọ bụ ekwensu na ịkwado ihe enyemaka dịka pallet, igbe, mkpuchi, .... Ị ga-amụtakwa otu esi echekwa n'enweghị nsogbu, rụọ ọrụ nke ọma na otu esi agụta, iṅomi ma deba aha ndị ahụ. N'ikpeazụ, ị mụtara ịlele na mezue akwụkwọ ndị na-esote.
Ị na-amụta ihe niile gbasara ịwụnye kpo ọkụ na ikpo ọkụ. Ị na-amụta ihe niile banyere nsị. N'ime mmụta abụọ, anyị na-akwadebe gị maka ọrụ na ụlọ ọrụ kpochapụrụ ọkụ ma ọ bụ na-ejide osisi. Ya mere, usoro ọmụmụ a jupụtara na ọrụ ọkpụkpụ.